ISETHI ejwayelekile | Apg29
ISETHI kusekelwe ukubethela, izitifiketi digital futhi nesignesha digital (ohambelana amasignisha ngesikhathi ukuthenga ikhadi njalo).
ISETHI sidzinga isofthiwe ukufakwa amakhompyutha. Lapho umthengi egcwele digital yezitolo ngobhasikidi zabo bese ukhetha "pay nge credit cards" kuthatha zokuxhumana ezehlukene. Izitifiketi ithunyelwa emuva naphambili, a oda ezimbili digital pay zidalwe futhi banikezwe ukulawula ebhange senziwa. Ngoba okhiye ukubethela eziphakamayo esitolo ngakho kukhona okuthiwa ukhiye impande kubo bonke abasebenzisi futhi yakhiwe zingene software.
ISETHI kuwumsebenzi futhi womhlaba wonke ukukhokha ngokuphepha nge credit cards on the Internet. Kuyinto ikakhulukazi mayelana commerce electronic nokukhokhwa izikweletu. Le phrojekthi yaqalwa ngo-90s maphakathi. Isifushaniso esithi imele Secure Okwenziwayo Electronic okuyinto IsiSwidi ivikeleke kuthengiselana electronic. Ayesetshenziswa ekudaleni standard sika izinkampani ezinkulu ezifana Visa, MasterCard, IBM, Microsoft futhi Netscape. Kwathi project umshayeli iqhaza kusuka Sweden ezinye amabhange esikhulu leposi Giro.
ISETHI kusekelwe ukubethela, izitifiketi digital futhi nesignesha digital (ohambelana amasignisha ngesikhathi ukuthenga ikhadi njalo). Technical Data wadala okuthiwa virtual ( "wokufakelwa") amakhadi kuhlanganise ukusetshenziswa isitifiketi esiydijithali futhi inombolo yekhadi lokuthenga ngesikweletu i ngekhodi uthunyelwa. Kuyinto amabhange kanye Verisign ngokuqinile ngubani ukulawula kanye nezitifiketi nkinga kokubili abasebenzisi ikhadi namabhizinisi. Verisign kuyinto ongusonkontileka omncane ongaphansi kukasonkontileka umbukiso. Somthengisi izitifiketi ezahlukene ongaqhathaniswa isitembu lokukhokha ke esidlule esebenziswe lapho kokwenza imali ebanjwayo for ukuthenga credit card.
Cyber ​​Cash iye yasiza ukuthuthukisa ISETHI futhi inohlelo efanayo nalena ebizwa ngokuthi Sips. ISETHI futhi CyberCash isebenzisa uhlobo olufanayo ukubethela. Verifone kungenye izinkampani engumakhelwane usebenzisa indinganiso SET, nokuthi sasisebenza ngesikhathi ihlolwe. Nge ISETHI futhi ezifanayo izinhlelo, awukwazi ukudlulisa imali phakathi kwabantu, njengoba amazwe bazama ukuvimbela zemali nezinto ezifana nalezo. Njenganoma cashless kangaka omunye bese usebenzisa ISETHI hhayi izinkokhelo encane ngenxa okusezingeni eliphezulu ukuphathwa izindleko.
Ezamakhompiyutha kanye nezinkampani ikhompyutha - emhlabeni electronic ezezimali emgogodleni
Kwakungenxa '50s njengoba amabhange kancane kancane waqala ukusebenzisa amakhompyutha nobuchwepheshe bokuxhumana ekusebenzeni kwayo. Ezinye umcabango ngisho ngaleso sikhathi ku uhlelo cashless sandile kuyo yonke iUnited States ukuthi ngabe ukuxhunywa ebunikazini. Bayibiza kungenzeka esizayo simiso EFTS (Kwemali Dlulisa System). Kodwa kwakuphakathi '60s njengoba izenzakalo ezihlobene amakhompyutha waqala kahle. Kwakuwusuku yasebhange abaphathi phakathi vurmade esinamandla kunazo zonke sokuhlanganyela computerization kule kusenesikhathi. Omunye kwakunguJohane Reed at Citibank (usihlalo kamuva ebhodini kukhona) owenza i igatsha lonke phathelana ezenzakalelayo.
Lokhu ngomdlandla computerization phakathi abaphathi phakathi nje kuphela e-United States. Ngisho eSpain, wasebenza ibe okuthile ngokuthi COAS (iKhomishana Opharetjhini Automation). Omunye ukuhlolwa zokuqala e-United States of izinkokhelo osheshayo exhumene uhlobo ID ikhadi senziwe 1967 e Wilmington eholwa Bank of Delaware. Kwaba IBM ekuqaleni yasungulwa magnetremsetekniken ukhulume iye yachazwa ngokuthi "kuyisipho esivela emhlabeni IT ezweni yasebhange."
ESweden Savings Wokukhuthaza ehola siqu Sven G Svensson advocate zakuqala for computerization lamabhange ukonga. Emuva lé ekhulwini 50th owawuse izingqungquthela yonyaka e Saltsjöbaden ezihlobene ýkhasýmende computerization. 90s kwaba eyishumi lapho i-Inthanethi okwaqala ngayo emhlabeni ibhizinisi. Izinkampani zivame uqalise nge neminye imisebenzi kodwa ekugcineni abe inkampani enkulu kukhompyutha. ke Ngokuvamile lezi benziwe imidondoshiya omkhulu yenkampani.
Burroughs kwaba yibandla elikhulu ikhompyutha, ngokugcizelela emhlabeni yasebhange. Burroughs eyakhelwe kuhlanganise SWIFT. Lena sokwakhiwa kohlelo lamazwe omhlaba ngokuxhumana phakathi amabhange. A izinkampani odlule ezinkulu ezizimele babe Sperry. Burroughs umqondisi Michael Blumenthal, waphumelela 1986 ukuze uhlangane Burroughs futhi Sperry ukuze Unisys. Blumenthal nalo lase ngaphambilini uNgqongqoshe Wezezimali.
Enye izinkampani ebaluleke zomlando kulo mongo, Remington Rand. Unisys bhizinisi kwakunezingxenye, okufaka phakathi kokunye ukuqhubeka umsebenzi SWIFT futhi banakekele uhlelo olukhulu iziqukathi RFID-umake ngoba ngenxa wezempi sika. RFID ubuchwepheshe okuhambisa imininingwane emincane usebenzisa amagagasi omsakazo. Njengoba sizobona, yibo bonke incwadi ukuthi ngokuya RFID uxhumano eziningi umphakathi cashless. uhlelo lokusebenza le-Microsoft isetshenziswa ATM sezivele okukhulunywa. I-Linux uhlelo lokusebenza iye yasetshenziswa kulezi, iningi amaseva Inthanethi kanye emikhulu zama-computer ukuze anamandla.
Esinye isibonelo inkampani, eFinland naseSweden asebenzayo inkampani IT Tieto phakathi kwezinye izinto syssIar ngu Ukukhishwa credit card amabhange amaningi. Facebook esenyukele embonini yokukhokha sina. Le nkampani yethule virtual (sobala noma yokufakelwa) lwemali ngo-2011 kanye nezinkampani computer game
ezazilengisiwe sathi ngokushesha ngemuva. Facebook zahlela ayizigidi 500 bazokwazi ukukhokhela nge-credit card nge-Messenger chatappen. Usebenzisa izindlela software wengxoxo ukuthi "inkulumo umbhalo." Lokhu kuthumela imisho phakathi kwawo kancane kancane (bheka inkulumo ucingo), ngokungafani e-mail kanye mail njalo.
Facebook futhi kuye kwaba ithuluzi nabakhwabanisi, ezifana ekudaleni Ica -like ohlangothini lapho kwezinye izimo, babamba inkunzi abantu ezinkulungwane kronor esethathelwa by inzuzo Kusolakala emncintiswaneni. Lokhu kungenziwa ngu ukuqoqa idatha ku amabhokisi ebhange. Inkampani Apple uyakhile semininingwane elikhulu zekhadi lesikoloto kumakhasimende abanokuhlangenwe amakhadi. Izinkampani ikhompyutha ufuna umphakathi cashless ngokwengxenye ngoba kuhlobene ukuze imikhiqizo yabo. I cashless ngaphezulu amakhompyutha ngaphezulu.
Njengoba umfundi uqagele ngenxa ulimi, akukho engu-20 ubudala wabhala le ncwadi. Uye wasebenza amakhompuyutha ngandlela-thile iminyaka abaningana. Nokho, Uneminyaka emingaki ngikhona, angithandi, ukuphathwa ngenxa yezizathu zobumfihlo. A nokuguqulwa iaktagelse subjective. Kungashona esaphila, nokuloba cishe isigamu le ncwadi ngaphambi ngingathanda nendinyana negative ukuphendula olulodwa ekufezeni umphakathi cashless ngasohlangothini umkhakha sekhompyutha. Kodwa-ke imayelana ngokuthile okwenzeka cishe engu-50 edlule. Izwe lanamuhla ikhompyutha ayibukeki sebelithathile bawabone amaphutha abo bese kubonakala ukuthi omubi umphakathi cashless.
Ukukhethwa imayelana indoda okuthiwa uPaul Armer kusukela RAND Corporation, futhi kakade ephezulu iphrofayela izinkinga zobumfihlo ngasekupheleni kwawo-60 emhlabeni cashless izinkokhelo. Wakhuluma lokhu US Senate. Sithanda kudingeka okwengeziwe amadoda nabafazi abanjalo emhlabeni ikhompyutha namuhla. Kukhona yebo ezibucayi wangaphambili abantu ebhange. Kodwa uphi sokugxekwa izwe ikhompyutha? Armer amangalelwe ngisho ukususa igama kusukela amarekhodi owenza ukuthi ngokwezinga elithile singakwazi ukubona ukuthi abantu.
Encwadini yakhe ethi kudingeka Armer ngesikhathi, idatha ku inkokhelo embonini computer. Lokhu kwakungekona ukuthi ufuna izinto ezenziwe ibhizinisi ku Punch amakhadi esitolo idatha kulokho lokuqala babecabanga ngendlela engaziwa. Idatha Yayinesikhwanyana kuphela neholo, imfundo kanye uqhekeko okwedlulele kwendawo ezindaweni ezintathu. Lapho uPawulu Armer ke ihlelwa izinto ngokulandelana, wayengase ngokushesha (okwakuqabukela okuhloswe kusukela ekuqaleni) ukubona ukuthi ubani lowo mlingiswa mayelana eyayinecilongo amaholo aphakeme. Lokhu kwakumane kuyisiqalo ukuzinikela kwakhe ingxoxo ubumfihlo kuqhathaniswa ubuqotho ikusasa lokhu kusilela njengoba izinkokhelo Mayelana cashless.
Mhlawumbe uxhumano kakhulu obalulekile phakathi kontantlöshet namakhompyutha siwukuthi bangamalungu cashless okuthiwa i-imali, ngaphandle ukuthi kugcinwa amakhadi esikhokhelwa nalo kugcinwe kumaseva ikhompyutha ngesimo okuthiwa imali inethiwekhi. Uma ucabangela amakhompyutha indlela abazizwa besongelwa, ngakho kungenzeka esikhundleni kungaba into ephephile ukuyeka nokusakazwa yezinyoni hamster.
Kulabo kuphela babe nesithakazelo ethile kwezama-computer, ngincoma hhayi ukuthenga i-computer. Musa ukuthenga i-computer nje ngoba kungase kube kuhle ukuba ngezinye izikhathi. Ungakwazi ukuphila ngaphandle. Kuyinto isimiso efanayo hhayi ukuthenga imoto ukuthi umi cishe nje egalaji. Ngenxa izinkampani ikhompyutha bagcizelele kakhulu ukuzama ukuletha kithi kontantlöshet futhi Big Brother ngakho ngeke adayise computer kakhulu ngendlela abafisa. Libuye into ewusizo kakhulu futhi kumnandi ukwenza ngekhompyutha. Isizathu esikhulu ukuthi kungani mina namanje ubambe kumakhompyutha ukubhala lezi zincwadi. I-computer kuyinto enhle kakhulu njengoba imitapo, umshini wokubhala ne ithoyizi ahlanzekile.
Kodwa ngizobuya bathembeke, isithakazelo sami amakhompyutha wafa kancane ngamunye isikhathi ngiye ezilotshwe kule ncwadi. Iyodwa into esiqiniseka ngayo. Uma inani cashless umphakathi uphezu kwethu, kukhona into eyodwa kuphela ukuncoma. Ubude kanye jikelele ubuchwepheshe bazoyiduba. Hhayi uhlobo into kufanele hushållsabetet ukwenza kodwa konke okunye ukuthi unesikhathi umsebenzi kuchumana ulwazi. Kuyinto ngobuqotho kusuka umbhali abathandana ngempela ubuchwepheshe. Okwazekayo, a ngokwanele ezinkulu ubuchwepheshe ngokwengxenye bazoyiduba ngokubulala kontantlösheten. It ngeke kube khona kungekho ubuchwepheshe. Cash ungaphatha nagezi nobuchwepheshe (ngaphandle ngokuphathelene Ekhiqizako). Senzé kanjalo emakhulwini ambalwa eminyaka.
Nakuba Ngifuna ukuqhubeka ukusebenzisa ikhompuyutha ngakho-ke akusho ukuthi izikhathi eziningana nami ecabangana umqondo wokuthi umane bagcina amakhompyutha. Wazibuza ukuthi ukuphila bekungaba futhi bathathe isinyathelo ngaphandle. Ngabaqaphi umphakathi nezilawuli izakhamuzi ezingasho kumakhompyutha. Kubonakala sengathi ngeke kuphele usizi. Ngakho kunjalo, ungathola kancane abazwela ngokweqile, futhi njengoba ngaso sonke isikhathi ngicabanga ngalokho okwenzayo kukhompyutha yakho.
Lapho umphakathi cashless sizobonisa ngokugcwele ubuso lawo elibi, mhlawumbe ngizobuya sengathi ngabe ngangimtshela njalo kudlalwa ibhola uhlelo sina ngokuphelele endaweni ukuba amakhompyutha njengoba omunye izithakazelo zami. Mhlawumbe kwakufanele abanye uhlobo isishoshovu nenkani endaweni ukuthi wayephule ekuqaleni computer ekhaya futhi PC nge ipayipi yensimbi. Esemi ngaphandle izikhungo mainframe ikhompyutha bezwakalisa ukuthi ufunde "Ukufa kwikhompyutha!". Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi, kungenzeka akulona le ncwadi yaba khona.
Kungase kube kulabo ongangibona njengoba reactionaries lobuchwepheshe. Lokho akunjalo ngaso sonke. Engingathanda athandani kakhulu indoda ekuhambeni izokweqa ezinodaka cashless emhosheni. Ukuze wenze lokhu, umuntu kufanele aqale athathe izinyathelo ezimbalwa emuva. Njengoba izinto zobuchwepheshe ezingasetshenziswa ngayo ngokugcwele ukusetshenziselwa izinto ezinhle futhi. Ekugcineni, kulula ukuba siphethe ngokuthi ngaphandle kokusungulwa bekhompuyutha umphakathi cashless obungenza kuyinto injalo efanele yesimanje.
Thina amakhasimende akhokhe izinkokhelo
kusho Lisekela Governor Lars Nyberg ngokoqobo ethula inkulumo uMkhakha wezeziMali Union Congress Balsta ngo-2008 kanjani.
Ngakho-ke wathi, umuntu ngaphakathi Riksbank, ngoba esisodwa, iqiniso nqunu. Kukhona amaklayenti abathengi ekhokha izinkokhelo. Manje ake ukugwema elalimbelesele mayelana nendlela inkokhelo yemali okuningi icala ukuba ukuhweba namabhange. Amabhange, ngenhlanhla, ngokwesilinganiso uhola abangamakhulu amaningana dollar inzuzo okumsulwa ngonyaka Swedish. Nokho, ungakwazi ukukhuluma "ukuhweba abampofu" lapho ngeke lifake takings zabo nsuku zonke ebhange. National Bank ufuna abantu ukuba basebenzise ngaphezulu amakhadi esikweletu ukuze kube njengoba ngokuyiphutha abathi ngaphezulu "kwezomnotho elilungile". Nyberg wafuna futhi ngaqonda lolu kodwa benza ngokuphelele kini ngokunishumayeza iqiniso.
Ngezinye inkulumo phakathi nawo-90 lapho Stefan Ingves kwakungamazwi acacile ashiwo iphini zombusi, ulandela.
"Ukuze amabhange, kanye yimigwaqo izinhlobo ezahlukene, ukuphathwa amanothi zemali ngenxa småvärdestransaktioner ngempela ebizayo."
"Ngo-ngomqondo obanzi, kuyinto efiselekayo ukuthi ukuthengiselana ngaphezulu ziqhutshwa ngekhompyutha njengoba kanjalo ezibizayo ukucutshungulwa lanamuhla iphepha-based kungenziwa olunye sinciphile."
Ingves isitatimende sokuqala ngaleyo ndlela zamanga ngokuphelele. Kuyinto abathengi hhayi ebhange, futhi ukuhweba ukuthi ekugcineni kuthatha izindleko izinkokhelo. Kanti amazwi angezansi kwawo iyaphikisana okuthiwa "ukuma kokungathathi-hlangothi" le Riksbank sika. Okungukuthi, kuba funa sabantu sika imali ukuthi ukulawula isixuku. It khulumela kontantlösheten Riksbank evulekile.
Kuyiqiniso ukuthi okwamanje ngokwayo angakhetha ukuthi uyasifaka yini ukusetshenziswa ukheshi noma credit cards. Kodwa lapho abantu njalo brainwashed amabhange, abezindaba, izinhlangano zikahulumeni kanye nabanye lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa cashless kukho njengoba has ngomqondo ezingokwengqondo, kususwe ingxenye enkulu isinqumo. Ngeshwa, abantu abaningi nje ukugwema elalimbelesele noma uma ukukhohliswa izinzuzo zamanga ezithela. Kwabaningi bethu kuba kunalokho umfutho ukuze ukumelana. Izindleko wesikweletu kugcinwa kuyimfihlo nesibalo esikhulu kakhulu amabhange kanye nezinkampani credit card. Ngaphezu kwalokho, kuphela amabhange kanye nezinkampani credit card babe iso lokho ngempela kwenzekani kontantlösbrott.
Izingxenye ezinkulu ukheshi sokusingatha umkhakha ngokuvamile ayinakho izibalo aphathekako ukubonisa kodwa "ukwazi" okwamanje ukuthi ukuphathwa kuyinto "ibiza ngokweqile." izinhlangano ezahlukene futhi abantu bekhalaza kamunyu ukuthi "imali yokuphatha ngezandla kubiza eningi kakhulu." Njengase ngokuya izinkokhelo langempela, it is we, abathengi ngubani ekugcineni futhi akhokhe nokuphathwa kwezimali. Ungumnikazi webhizinisi ithatha hhayi imali isikhwama sakhe, isibonelo, pay ngokheshi handling, Loomis. Ekuqaleni amabhange ngeke ikakhulu imali ukuze ukhokhe kwezohwebo kodwa ekugcineni kuba umthengi okhokhayo. Manje sesisungule ngubani ekugcineni ukhokha kokubili izinkokhelo kanye nokuphathwa kwezimali. Ngakho-ke akuyona isikhathi ukuyeka asemikhumbini ukusungulwa.
Kwezinye izingqikithi eziningi ezibhaliwe kuphela ukuthi izinkokhelo izobiza imali yebhizinisi. Akukona ukuhlukanisa phakathi izindleko zomphakathi zangempela, izindleko zebhizinisi kanye nezindleko womuntu. Kuyinto ngokungenasizathu ukukhuluma nanoma izindleko ezintathu ezahlukene kuye ngokuthi uthanda ze. Into ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzosebenza ngubani ekugcineni ukhokha. Kulokhu abathengi.